Ahoana ny fomba famongorana ny Lenovo K3 Note | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Android Root, Lenovo, Tutorials
Amin'ity fampianarana vaovao azo ampiharina vaovao ity, nampanantena tato ho ato Lenovo K3 Fanamarihana fanamarihana, Android 5,5 ″ terminal FullHD mahatalanjona, mpiorina Octa Core 64-bit ary RAM 2 Gb azonay vidiana 135 Euros fotsiny, hasehoko anao misaotra an'i Xancín de mahafinaritra Telefaona DualSIM, dia Ampidiro ny TWRP Recovery ary Root Lenovo K3 Note amin'ny fomba tena tsotra.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia, ampidino ao anaty zip ity rakitra voageja ity ary esory eo amin'ny birao misy ny solosainantsika Windows manokana. Ity rakitra ity dia fanangonana manokana ny zavatra rehetra ilaintsika mandritra ny fandefasana ny TWRP Recovery ao amin'ny Lenovo K3 Note mba hahafahanao mamaka azy avy amin'ilay fanovana novaina voalaza etsy ambony. Ny fonosana dia misy ny installer automatique ary koa ireo mpamily ilaina ary ny SuperSu.
1 Inona no azoko amin'ny fametrahana TWRP Recovery sy Rooting Lenovo K3 Note?
3 Dingana tokony harahina hametrahana TWRP Recovery amin'ny Lenovo K3 Note
4 Ahoana ny fomba hanonganana ny Lenovo K3 Note
Inona no azoko amin'ny fametrahana TWRP Recovery sy Rooting Lenovo K3 Note?
Ampidiro ny TWRP Recovery ary Root Lenovo K3 Note hanampy antsika hahatratra lafin-javatra mahaliana toy ny fahaizana manatanteraka a nandroid backup an'ny rafitray miasa manontolo afaka mamerina azy io amin'ny fanarenana mihitsy nefa tsy misy olana lehibe. Ho fanampin'izany, ho vitantsika ny hamaha ny olan'ny herin'ny feo ambany asehon'ity terminal Android manaitra ity avy amin'ny ozinina, amin'ny alàlan'ny fametrahana Lenovo Rom ofisialy izay hanao koa havaozina ny Lenovo K3 Note amin'ny andiany farany an'ny Android 5.1 Lollipop. Izany rehetra izany dia hasehoko anao amin'ny tutorial-video manaraka izay ataoko izao.
Ny fepetra takiana amin'ny kaonty mba Ampidiro ny TWRP Recovery ary Root Lenovo K3 Note ho an'ny fahatsoran'ny fanatanterahana ireto fepetra takiana ireto:
Manana a Lenovo K3 Note modely K50-t5
Alefaso ny debugging USB avy amin'ny sehatry ny fampandrosoana raha asehoko ao amin'ilay horonan-tsary mifamatotra eo ambonin'ireto tsipika ireto ihany.
Asao ny batterie ho 100 x 100
Manana solosaina misy rafitra fikirakirana Windows miaraka amin'ireo mpamily izay apetrako ao anaty fisie Zip napetraka tsara.
Dingana tokony harahina hametrahana TWRP Recovery amin'ny Lenovo K3 Note
Hapetraka aloha ireo mpamily fa nifamatotra taminao tao amin'ny zip aho ary hamerina ny solo-sainay manokana, ary koa raha manana antivirus na firewall afaka mandeha izahay dia tsy hampaninona azy ka tsy hamokatra amin'ny fizotran'ny TWRP. Ireo mpamily PDANet dia tsy tokony apetraka amin'ny tranga voalohany, fa hapetraka fotsiny isika raha tsy afaka mampirehitra ny TWRP Recovery amin'ny LEnovo K3 Note ny mpamily ofisialy..
Efa miaraka Nasaina ny debugging USB, isika campifandraiso amin'ny solosaina ny Lenovo K3 Note ary hampihatra ny rakitra Recovery.bat izahay ary araho ny torolàlana izay aseho eo amin'ny efijery amin'ny solo-saintsika manokana sy ny fanekena izay rehetra miseho eo amin'ny efijery an'ny Lenovo K3 Note. Rehefa tapitra ny fizotrany dia hiteny amintsika ny efijery momba ny solosaina ary afaka esorintsika soa aman-tsara ny Lenovo K3 Note amin'ny TWRP napetraka eo amboniny. Raha nanome karazana lesoka taminay izy io, dia apetrakay ny programa PDANet ary averinay indray ny solosaina hamerina ny fizotrany. Ataovy ao an-tsaina fa ao amin'ny dingan'ny fiparitahan'ny TWRP dia hamerina indroa farafahakeliny indroa i Lenovo.
Ahoana ny fomba hanonganana ny Lenovo K3 Note
Raha vantany vao tafapetraka ny Recovery TWRP, andao isika handeha etoAdikao mivantana ny Zip an'ny SuperSu mankany amin'ny foton'ny fahatsiarovana anatiny na ivelany an'ny Lenovo K3 Note ary handeha hamerina amin'ny laoniny mode Recovery isika, hamono ny terminal ary hamerina azy indray fa amin'ity indray mitoraka ity dia mihazona miaraka ary tsy mamoaka ny bokotra. miakatra sy midina miaraka amin'ny bokotra herinaratra miaraka amin'ny bokotra herinaratra.
Tsy handeha irery amin'ilay safidy isika izao hametraka y safidio ny Zip an'ny SuperSu, afindrantsika ny bara mba hametrahana ny zip ary afaka hamerina ny rafitra miaraka amin'ny terminal miorim-paka tanteraka isika.
Download- Fametrahana TWRP sy Root Lenovo K3 Note Pack, Fitaratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Root » Ahoana ny fametrahana TWRP Recovery ary Root Lenovo K3 Note
110 hevitra, avelao ny anao
Ho an'ny olona toa ahy izay vao vao novonoina dia tsy takatra mihitsy izany, rehefa misintona ilay fampirimana aho dia tsy fantatro hoe inona ireo mpamily, tsy mahita rakitra antsoina hoe recovery.bat aho, ary tsy fantatro mahalala ny fomba ahafahan'ny deboka fanovana (na fantatro ankehitriny) fa tsy mazava izany
Ao amin'ny lahatsoratra dia nohazavaina tsara ny zava-drehetra, esorinao ny zip'i ZIP ary voalamina tsara ao anaty lahatahiry ny zava-drehetra. Raha ny momba ny debugging USB, dia misy ary mampiseho horonan-tsary mampiseho ny fomba ahafahana mampandeha azy.
Adomene dia hoy izy:
Azafady, mila fanampiana aho nametraka sy nanalana in-20 ary tsy afaka mametraka ny twrp aho, azoko ilay avy amin'ny orinasa. Nahavita ny dingana rehetra aho rehefa nanomboka ny fanarenana.bat manao ny dingana rehetra tonga lafatra fa rehefa manala ny bateria ary manodina azy amin'ny alàlan'ny fanindriana + - ary ny famadihana azy dia tsy azoko! Somary kivy aho izao .. Misy afaka manampy ahy ve?
Valiny tamin'i Adomene
Salama, voavaha ny olana, mitovy amin'ny anao ihany aho, manana ny fanarenana ny orinasa amin'ny sinoa aho. Adala aho
Heveriko fa satria voasakana ny bootloader, nametraka twrp imbetsaka koa aho ary miditra amin'ny maody fanarenana ny orinasa ihany. Misy mahalala ny fomba hamohana ny bootloader ao amin'ny terminal? Amin'ny baiko "fastboot oem unlock" ihany ve?
Carepuky dia hoy izy:
Inona no dikan'ny fanarenana twrp ???? ary ny faka tsy zaraiko dia tsy misy takatra ho an'ireo izay sambany te-hanongotra na flash na telefaona
Valiny tamin'i Carepuky
Ry namako, raha mamaky ilay lahatsoratra ianao ary mijery ilay horonantsary dia ho azonao tsara izany.
Salama, marina ny anao momba ilay horonan-tsary hampandeha USB debugging, tsy dia sarotra loatra ny tena marina, ary ny momba ny twrp dia afaka nametraka azy ihany aho tamin'ny farany saingy tsy nantsoina hoe recovery.bat fa ny sitrana, ka tsy afaka aho, arahaba ary misaotra nizara
Wenas, manana olana aho maka tahaka ny Zip SuperSu mivantana ao anaty fahatsiarovana anatiny ny finday, tsy haiko ny manao azy = S
Mety hanampy ahy ve ianao? misaotra =)
Francisco nefa tsy nahalala na inona na inona nilalaovako azy ……. Ary heveriko fa nandaitra tamiko io… Misaotra anao tamin'ny zava-drehetra, raha tsy dia be loatra ny hadalana… ahoana no hanesoranao ireo rindranasa tsy ilaina ??? Ohatra, indrindra fa rehefa miala sasatra ny sela ary rehefa te hampiasa azy ianao dia mahazo sary maromaro eo amin'ny efijery manakana ... Satria amin'ny fomba mahazatra dia toa tsy miasa ny fomba "tsy mitombina" ary tsara ny fomba fantaro hoe inona ilay fampiharana… .Ary ny iray hafa amin'ny fotoana tsy ahitan'ny rom ny tanànako, avy any Santiago de Chile aho, sambany tao amin'ireo forum ary sambany nanodina Telefaona…. Misaotra!
Salama, efa vitako ny nametraka ny zip SuperSu tamin'ny telefaona tamin'ny alàlan'ny memoara ivelany, ny olana ananako ankehitriny dia ny fametrahana ny Zip, novahako ilay izy ary nivoaka ny SuperSU apk ary nametraka azy aho, ny olana dia rehefa sokafy dia lazainy amiko: ny SU azo ampiharina tsy apetraka ary tsy afaka mametraka azy i SuperSu… .tsy fantatro raha diso ny nametrahako azy… raha azonao atao ny milaza amiko izay tokony hataoko na video iray hahitako izay tokony hatao. io, tiako ilay izy =) noho ny safidy apetraka dia hanome zio SuperSu tsy haiko ny fanaovana azy (somary miketrika aho amin'ireto zavatra ireto = S)
Inona no ilaina amin'ny supersu? Nilaina ve izany?
Mamaly an'i joan
Raha te-ho faka ianao dia tena ilaina izany. Miarahaba namana.
Salama, rehefa misintona ny rakitra zip TWRP Recovery aho dia lazainy fa efa simba na tsy mety io ary tsy afaka mamoha azy aho ... Ampio, azafady.
Gabriel Jahird Soto San Martín dia hoy izy:
Misaotra namana, tena mora atao. Ankehitriny, ahoana no fomba hahitako ny volan'ny orinasa? raha afaka manampy ahy amin'izany ianao dia ho tsara izany.
Misaotra anao indray 🙂
Valiny tamin'i Gabriel Jahird Soto San Martín
Salama tompoko tsara Francisco. Tonga lafatra ny zava-drehetra ho ahy! Mila manaraka ny dingana fotsiny ianao, mamaky tsara ary mangataha amin'Andriamanitra mba tsy hisy zavatra tsy mandeha maninona eny an-dàlana ... Jeneraly ianao, tena sarobidy ny fanampianao. Mirary soa ary mirary soa ho anao hanohy hanampy ny zaza vaovao toa ahy….
Raha Francisco… tena tsara daholo ... Ary izao ???? Aiza no ahitanao ny mombamomba ... momba izay azonao atao amin'ny maha-faka ... esory ny rindranasa, ovao ny fotoana ... ny habetsahana ... sns ... Ity sela ity dia mitazona karatra mihoatra ny 32gb?
Mahazo ilay hadisoana mitovy amin'ny namako Ramón aho. Ny .zip miaraka amin'ny fonosana fanarenana lenovo root 2b dia milaza amiko ho simba ary tsy azo sokafana. Misy vahaolana ve? Misy olona afaka manangana azy io indray ve? Misaotra!
Boni dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana rehetra aho ary nametraka supersu fa rehefa manokatra azy aho dia tsy mahazo rindranasa esorina.
Tsy afaka manao fandidiana aho.
Naveriko indroa ny dingana rehetra ary nitovy ny vokany.
Misy vahaolana ve ???
Valiny tamin'i Boni
paoma 1966 dia hoy izy:
VONJEO !!!! Nametraka TWRP RESOVERY aho ary nandika su, saingy mijanona amin'ny:
Unmoutnting / rafitra sy / data
Nosoratan'i QiShiWang @ bbs.ydss.cn
Aorian'ny famerenana indray, ary miverena amin'ny efijery DualSim TWRP v2.8.4.0 Mobile
Ny azoko atao !!!!
Mamaly an'i manzano1966
Efa nanandrana azy io indray aho tamin'ny alàlan'ny fandikana ny su ao anaty rrot an'ny finday ary milaza izany
E: Mount: Tsy afaka mahita fizarazarana ho an'ny lalana '/ faka
Fahadisoana raha mamaky zip '/root/SuperSU-v2.4.6.zi0
Salama maraina Francisco, jereo, efa nanao izay rehetra nolazainao aho ary nosakanako ny naoty Lenovo K3, tsy mandalo ahy amin'ny efijery an-trano izany. Afaka miditra amin'ny efijery aho amin'ny alàlan'ny fanindriana ny habetsahana sy ny herinao, manandrana manarina aho saingy rehefa manandrana mamerina azy aho dia milaza amiko fa tsy mahita ilay OS aho. Ary izany no nataoko talohan'ny backup nandroid.
Afaka manampy ahy hamaha azy ve ianao? Misaotra betsaka
Salama daholo. isaky ny dingana mihidy ny telefaona dia esory ny batterie ary avereno ny telefaona. Araho ny torolalana Andriamatoa Francisco avy eo.
Olexiy dia hoy izy:
Salama aho tsy afaka mametraka TWRP Recovery sy Root Lenovo K3 Note. Ataoko tsara ny zava-drehetra, manomboka ny fametrahana ary tsy vita.
Efa nanandrana azy tamin'ny fomba isan-karazany aho ary nitovy foana. Afaka mamaka tsy misy fanarenana aho. Misaotra!
Mamaly an'i Olexiy
Salama. Napetrako tamin'ny fomba tonga lafatra ny TWRP Recovery fa rehefa apetraka Supersu dia apetrako amin'ny sitrana izany rehefa manazava amin'ny horonantsary ianao ary mametaka fa tsy misy faka ary tsy afaka manao asa avy amin'ny supersu. Tsy haiko ny mamaha azy.
Misy hevitra Francisco ????
Hisy zavatra hitranga ve raha tsy manana ny bateria 100% aho?
Salama, nanao hadisoana aho tamin'ny fanarahana ireo dingana ary tsy nandika ny Zip SuperSu tamin'ny fahatsiarovan'ny telefaona aho. Ankehitriny tsy azoko atao ny manamboatra azy io na mamerina amin'ny laoniny ny toeran'ny orinasa. Inona no azoko atao, azafady ?.
momochiami dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko, Oscar! Ahoana no nanamboaranao azy?
Mamaly an'i momochiami
manuelferal dia hoy izy:
Ahoana no namahanao azy?
Mamaly an'i manuelferal
Io Oscar io! Ahoana no nanamboaranao azy ??… toy izany koa no nanjo ahy… Tena nangetaheta aho nitondra izany tany amin'ny magazay SAT ary tsy novahan'izy ireo koa… afaka manampy ahy ve ianao? fiarahabana
Tsy afaka nisintona ireo fisie ilaina mihitsy aho, nilaza tamiko ilay pejy fa efa nihoatra ny fetra fampidinana aho ary hiandry adiny iray, noho izany nandeha tontolo alina 🙁 Fantatro fa mety hahazo onitra vola ianao amin'ny fampiasana ireo mpizara rakitra ireo, fa amin'ny fomba fijeriko manokana dia misafidy ny Mega aho, misaotra ihany
Misaotra, ny tutorial dia niasa tonga lafatra ho ahy
Carlos Carracedo sary placeholder dia hoy izy:
Izaho no tompon'ny terminal feno fifaliana mandritra ny herinandro mahery kely ary tiako hongotana mba hahazoana ilay apps sinoa tsy mandeha amiko .. rehefa manao ny fizarana fampianarana aho dia tsy mifanandrify amiko ireo menio fa izy ireo zavatra mitovy. Manao ny fizotrany aho ary mampitandrina ahy amin'ity angano manaraka ity: ankehitriny ny rafitra dia hametraka update.zip ny lahatahiry root avy amin'ny sdcard2. satria os android l encrypt, ny rafitra dia tsy manohana ota form sdcard azafady miverena amin'ny client ota Android hatao. Safidy 2 eny, tsia, raha tsindrio raha tsy nahomby ny fametrahana ary miverina amin'ny menio aho raha tsindrio io dia tsy miverina amin'ny menio .. Misy sosokevitra ve?
Valiny tamin'i Carlos Carracedo
Salama!! Toy izany koa no mitranga amiko toa an'i Carlos…. Inona no tsy nety nataontsika ary ahoana no hamahana izany?
ok mangina ny mpizara izay ampakarinao ny fisie fako
Valiny amin'i EDU
Raha vantany vao mavesatra amin'ny finday ny TWRP dia manomboka indray izy ary hiseho ilay efijery dualsim miaraka amin'ny android izay niampita ny tanany. Saingy tsy mivoaka mihitsy ny menio ary mitohy hatrany ny fàfana an'io efijery io isaky ny 6 na 7 segondra ... Misy hevitra ve?
Ankasitrahana fa rehefa miresaka momba ny fampiharana hapetraka ianao, ireo izay ao anaty zip, dia lazainao ny anaran'ny fisie satria amin'ny farany tsy fantatrao izay tokony hikitikao. Misaotra (tsikelikely, eritrereto fa izay miharihary ho anao, dia labyrint an'ny hafa)
matiasbriones dia hoy izy:
Azafady mba omeo valiny izahay hamahana io olana io ihany, satria ao anatin'ny toe-javatra iray isika rehetra.
Valiny amin'ny matiasbriones
ector dia hoy izy:
Salama, Mba hanesorana ireo fisoratana anarana sinoa ao amin'ny kaontiko lenovo k3, mila ny supersu pro ve ianao ???
Mamaly an'i ector
Salama maraina Francisco. Ara-dalàna raha maharitra ela eo amin'ny efijery ilay lahatsoratra: USB Transferring / USB Transmission OK Time Vel sns…?
Alexander R dia hoy izy:
Naharitra ela ve tao amin'io fanjakana io?
Valiny tamin'i Alejandro R
Salama, manao ny zava-drehetra aho, mametraka tsara, apetraho ny sela mainty, averiko indray izy io ary azoko ilay lenovo recoveri fa tsy mety ny nataonao
Lisa dia hoy izy:
Nahita ny horonantsary rehetra aho, namaky ny zava-drehetra, ary nanandrana nanao an'io mihitsy aho, marina fa tsy mahay ireo zavatra ireo aho, fa raha afaka manao horonantsary ianao izay ahitanao tsikelikely ny fomba fanaovana azy ny debugging USB Heveriko fa ny Nanda toa ahy, dia hankasitraka azy be izahay satria misy ampahany very. MISAOTRA ANAO
Valiny tamin'i Lisa
Vonjeo kely azafady. Mazava be daholo fa tsy avelako hametraka ilay fanarenana. Amin'ny dingana voalohany, omeo ny recovery.bat ary misy lakile manan-danja ao amin'ity manaraka ity.
* daemon tsy mandeha. manomboka azy eo amin'ny seranana 5037 *
Azafady iza no afaka manome tanana ahy amin'izany.
Miala tsiny, adinoko ny nilaza an'io taloha ary nametraka ireo mpamily tamin'ny fomba marina ary namerina namerina ilay pc
Toy izany koa no mitranga amiko amin'ny miguel.
Mametraka ny mpamily aho, hoy izy ok ary avereno.
Fampihenana usb mavitrika, ampifandraisiko ny finday ary omeko ny fanarenana.bat
Mivoaka ny efijery, tsindrio ny bokotra, omeko ary avy eo
ary tsy manao zavatra hafa izy ...
Pd miaraka amin'ny sembana avast vitako izany rehetra izany.
Alex efa manana ny vahaolana aho ary holazaiko aminao.
Ny olana dia tsy nahita ireo finday araka ny tokony ho izy ireo mpamily izay nampidininay sy nametraka anay, koa lazaiko aminao ny fomba hanaovana izany na farafaharatsiny niasa tamiko.
apetraho tsikelikely ny zava-drehetra araka ny lazain'ny tutorial ary avereno indray ilay pc ary apetaho ireo mpamily PDANet ary avereno indray.
Zava-dehibe fa rehefa apetrakao ny PDANet dia mitady ny fidirana mivantana ateraky ny pc izy ary miaraka amin'ny finday mifandray amin'ny fomba debugging usb amin'ny pc, kitiho ny fidirana mivantana PDANet. manohy mifarana amin'ny dingana manaraka amin'ny lesona fa raha vao miala amin'ity ny hafa rehetra dia mitovy. Manantena aho fa nanampy anao ary raha nanazava izany tsy izy aho dia hiezaka ny hanazava azy aminao tsara kokoa.
ZAVA-DEHIBE: tsy maintsy apetrakao ny mpamily lenovo, izay no nalainay ary koa ny PDANet, samy tsy nosoloinao na iray aza.
Misaotra Miguel, andramako any an-trano izany rahampitso, lazaiko anao
Ny olako dia ny namerenako ny findaiko tamin'ny fomba fanarenana, nanome ny safidy roa (amin'ny teny anglisy, ary amin'ny teny sinoa), ary noho izany ny zavatra voalohany tokony hataoko dia ny fametrahana ny sitrana TWRP, izay ho an'ireo izay tsy mahalala izay Izy io dia ilay maody "tsara", hamerenana amin'ny laoniny ny finday amin'ny maody fanarenana, izany hoe ny sary voalohany amin'ity pejy ity izay tsy azoko nidirana raha tsy nametraka ny TWRP aho. Ankehitriny, nanao ny dingana aho ary tsy nametraka azy io rehefa nosokafako ny rakitra recovery.bat (ilay tsy misy afa-tsy 3 kb.), Ary efa nanandrana nandritra ny roa andro aho nefa tsy nahomby. Amin'ny farany, hoy ny fanazavana, nametraka ireo mpamily pdaNet sy tanan'ny olo-masina aho. Mba hanaovana izany amin'ny finday mifandraika amin'ny pc, fa tsy ny deboka usb dia niova ho safidy fitahirizana usb aho, ka eto ambany manaraka ny famantaranandro sy ny daty dia manana sary famantarana mahatsikaritra ny finday aho. Rehefa avy nametraka manaraka ity horonantsary ity aho: «https://www.youtube.com/watch?v=PVcf9psziR8». Araho ity horonantsary izay tiako ity, mila mametraka ny TWRP aloha ianao mba hahafahanao mandrehitra ny finday amin'ny fomba fanarenana araka ny hazavaina ato amin'ity pejy ity, ary amin'ny faran'ny video dia hitanao izay hatao, izany hoe, toa ahy hoy tamin'ny finday mifandray, miova amin'ny maody fitehirizana aho, aorian'izay dia mametraka mpamily pdaNet izahay, manaiky ny efijery mivoaka ianao, ny iray amin'izy ireo dia manome anao safidy telo fa mazava ho azy fa io no safidy USB apetraka amin'ny finday, satria izy io ny fomba nampifandraisanao azy amin'ny pc, raha vantany vao vita ny famerenanao ny rakitra fanarenana.bat ary farany manindry lakile ianao ary mametraka azy, averina ny finday, hitanao ny efijery mainty misy litera kely amin'ny lafiny iray ary rehefa apetrakao ny ramanavy izay nahavita dia manome fanalahidy hafa ianao, mikatona irery izy, HANALA ny fonon-tanana sy ny batterie avy hatrany amin'ny MOBILE ianao, ary voila, rehefa manandrana mamadika ny finday amin'ny fomba fanarenana (volavola +, volavola - ary ny fahefana), mivadika AT ATY Farany toa ity fampianarana ity. fiarahabana
javigg594javie dia hoy izy:
Toy izany koa no mahazo ahy toa anao, saingy tsy afaka manomboka ny fangatahana PDANet aho. Omeko fa tsy misy mivoaka. Misy torohevitra ve?
Mamaly an'i javigg594javie
Raha tsy napetrako tao anaty mode debugging io dia tsy avelako hametraka ny mpamily pdanet aho, amin'ny maody fitehirizana be dia be ny safidy hanohizana, raha tsy izany dia mitovy daholo
Mamaly an'i Àlex
Manana olana amin'ny lisitry ny fifandraisana aho satria manafina maro, misy vahaolana ve? Misaotra anao
Mety amin'ny kinova K50a40 ve izy io?
Mamaly an'i Hey
Nametraka ny kinova android vaovao aho fa namolavola tsy nahy ny zava-drehetra ary tsy manana os ny lenako, ahoana no hametrahako azy amin'ny note Lenovo ahy3.
ing Jose David Mendoza dia hoy izy:
Saika maty ny naoty k3 nataoko, napetrako tao ireo mpamily. Nomeko ny fanarenana.bat. nihazakazaka fa tsy nanomboka ny tranoko, mainty misy litera fotsy, nesoriko ny batery, ary niverina aho, nanomboka indray, nampifandray azy tamin'ny tariby ary nampita ny supersu.zip tamin'ny fahatsiarovana anatiny, novonoina ary nodimandry tamin'ny fomba fanavaozana tsindrio miaraka amin'ireo bokotra telo, apetraho ny zip. fa tamin'ny faran'ny fametrahana dia nomeko hamafana dalvik / cache. ary avereno indray. Taitra izaitsizy tokoa, nanomboka ny telefaona saingy niraikitra tamin'ny lenovo niaraka tamin'ny litera mena, ka nandany antsasakadiny teo aho natahotra, esory ny bateria hamonoana, avereno miverina indray amin'ny laoniny, nametraka indray ny zip ary avereno indray ny rafitra, tsy mila mamafa, ary vonona aho manomboka, avelako eto raha sanatria sendra olona ity, arahaba ..
Mamaly an'i ing. Jose David Mendoza
Misaotra betsaka, nilalao azy ihany koa aho ary nandeha tsara ny zava-drehetra, ny hany zavatra mbola mivoaka amin'ny teny anglisy ny zavatra sasany fa tena tsara daholo, arahabaona. dia hoy izy:
Miarahaba nanao risika aho nefa tsy nahalala ary nandeha tsara ny zava-drehetra noho ilay mpampianatra lehibe bque Andriamanitra manohy manome azy fahalalana mba hanohizanao ny fizarana aminay ny lenovo k3 naoty an'ity ambony ity
Valiny to Misaotra betsaka, nilalao ihany koa aho ary nandeha tsara ny zava-drehetra, ny hany zavatra mbola mivoaka amin'ny teny anglisy ny zavatra sasany fa ny zavatra hafa rehetra dia tena tsara, arahabaina
Salama maraina daholo, manana fanontaniana aho izay antenaiko fa misy afaka mamaly, efa manana ny Lenovo K3 miorim-paka amin'ny Kingroot aho, afaka manohy mametraka ny sitrana TWRP ve aho sa tokony hanao ny dingana rehetra hatramin'ny voalohany? Talohan'izay dia tiako ny tari-dalana azonao raisina, ary misaotra betsaka ny mpiara-monina iray manontolo tamin'ny fampianarana sy fanampiana omenao.
Valiny tamin'i J. Carlos
Alfonso Bernal Bravo dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana rehetra aho, na dia mametraka Pda fotsiny aza aho toa ny nolazain'ny exe (miaraka amin'ny telefaona mifandray amin'ny debugger). Ary milamina ny zava-drehetra, tonga lafatra izany. Fiarahabana avy any Chile (Temuco), miasa tsara miaraka amin'i Entel ity telefaona ity.
Valiny tamin'i Alfonso Bernal Bravo
CUA dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana aho ary rehefa nametraka ny TWRP (miaraka amin'ireo mpamily PdaNet izay tsy nifandray), dia mihantona eo amin'ny efijery an'ny:
Miandrasa azafady amin'ny alàlan'ny fametrahana TWRP ...
Mihantona ny telefaona ary mainty misy litera kely etsy ambany izay milaza hoe> maody FACTROOT
Misy mahalala ny zavatra tokony hataoko?
Mamaly an'i cua
Matiazzz dia hoy izy:
azo antoka fa zavatra tsy nety nataoko satria manana ny efijery amin'ny maody FASTBOOT aho ... misy vahaolana ve?
Valiny tamin'i Matiazzz
Mijanona eo amin'ny efijery milaza aho fa i Lenovo dia midina amin'ny alàlan'ny android
ary tsy misy intsony
Ary inona izao no ataoko ??????
mba ampio maika azafady !!!!!
Kenneth dia hoy izy:
Mamerina ny sela ve ity orinasa ity?
Mamaly an'i kenneth
Alejandro Carvajal dia hoy izy:
Raha hongotako ny fitaovana dia manjelatra ary very ny fampahalalana (sary, sary, mozika)? Raha eny, ahoana no fomba hanaovako ilay backup?
Valiny tamin'i Alejandro Carvajal
Ampidiro ny zava-drehetra araka ny voalaza, tsy nanary lesoka aho fa rehefa manomboka ny fanarenana dia mbola mahazo an'i Lenovo ary tsy manome ahy ny safidy fanarenana izay tokony napetraka, olona inona no mety ho antony? ny fametrahana dia normal daholo, fa tsy azoko ilay recobery araka ny tokony ho izy, azoko ilay taloha. salama!
Salama, nanaraka ny fomba fanao aho, tsy maintsy nametraka PDAnet, nametraka ny SuperSu; preto izao vao manomboka ahy amin'ny TWRP, tsy misy fomba hamerenana amin'ny laoniny ny mahazatra. Efa nanao backup aho, averiko amin'ny TWRP izany; saingy mbola mamerina ahy amin'ny TWRP ihany io. Nesoriko mihitsy aza ny bateria.
Inona no tokony hataoko??
Mino aho fa mandefa viriosy ny POST-nao!
jolumafe dia hoy izy:
Miasa ho an'ny Lenovo A616 (MTK6752) ve ity TWRP ity?
Mamaly an'i jolumafe
dioni dia hoy izy:
Salama. Fanontaniana iray momba ny fakany ny lenovo. Raha manao ianao ary rehefa afaka kelikely dia te-hamerina ny rafitra aho, azo atao ve izany? Fanontaniana faharoa, misy fiatraikany aminao amin'ny fiantohana azy ve ny fiorenan'ny smartphone? Miarahaba ary misaotra
Mamaly an'i dioni
Raha hongotanao izany, apetraho ny Recovery ary manaova backup nandroid, azonao atao ny mamerina ny rafitra amin'ny fomba nety azy tamina fotoana rehetra, tamin'ny nidiranao tamin'ny Recovery fotsiny ary nanarenana ny Backup. Etsy ankilany, ny fiorenan'ny terminal dia misy fiatraikany amin'ny fiantohany, ankoatr'izay. Raha mahazo fanavaozam-baovao amin'ny alàlan'ny OTA ianao dia tsy tokony hametraka azy ireo satria azo antoka fa biriky ny terminal.
Nanandrana namerina ny dika mitovy tamin'ny 2015 aho ary tsy mandeha araka ny nolazainao.
Salama, namaka aho, tsara daholo ny zava-drehetra, saingy rehefa mamafa uninstall aho dia manana ny sarin'ilay robot maitso kely, mamafa azy ireo aho ary miseho indray izy ireo, misy soso-kevitra hamahana azy? Misaotra
Salama aho nanao izay rehetra tonga tao amin'ny horonan-tsary fampianarana ary azoko eo afovoan'ny efijery ireo litera fotsy, izay toa efa napetraka tsara ny fanarenana fa rehefa manindry ireo bokotra telo aho miaraka amin'izay dia mahazo ny efijery amin'ny teny sinoa sy anglisy aho , Niezaka aho araka ny nolazain'i David tamin'ny fametrahana ireo mpamily miaraka amin'ny telefaona mifandraika, raha miova amin'ny maody fitehirizana aho dia tsy mametraka na inona na inona, tsy mahita ny finday ary raha apetrako amin'ny maody debugging dia mandeha tsara indray ny dingana ary rehefa dia nanomboka tamin'ny fomba fanarenana mitovy amin'ny azy, ny fampisehoana amin'ny teny sinoa sy anglisy.
Tsy hitako izay hatao hafa
Beelzebhu dia hoy izy:
Salama alina, toy ny mpiara-miasa amiko Daniel aho, ek recovery.bat manaiky ny terminal ary mametraka azy tsara, ny hafatra fiarahabana dia miseho amin'ny solosaina sy ireo litera kely miaraka amin'ny ok amin'ny finday fa rehefa averiko indray dia azoko ny Lenovo. ary tsy twrp. Aiza ny olana ?? Francisco, azafady, ampio izahay amin'izay azonao atao ... Manantena ny hiasa amina romana mendrika sy amin'ny fiteninay izahay. Misaotra mialoha ary misaotra an'i
Mamaly an'i Belcebhu
Salama, ny TWRP Recovery dia tsy mandeha amiko, ataoko izay lazain'ny tutorial fa mijanona amin'ny efijery maitso faharoa, avy eo tsy mitranga izany, nametraka ny mpamily PDANET ihany koa aho ary tsy nisy, tsy nitohy izany. Moa ve noho ny laharana fanangonana tsy mitovy amin'ilay napetrakao tao amin'ny lesona? ny ahy dia VIBEUI_V2.8_1535_5.128.1_ST_K50-t5.
Cool tutorial. Nivoaka voalohany nefa tsy nampiasa ny mpamily PDANET. Ho fanampin'ny fametrahana ny ROM izay tonga ilay fampianarana hafa
Nataoko daholo ny dingana rehetra fa rehefa apetrako ny volume + sy - ny bokotra herinaratra dia mahazo fanarenana lenovo aho fa tsy ny TWRP Recovery efa in-3 no nataoko ary mbola mitovy ihany io, afaka manao zavatra ve aho?
Manana android 5.1 aho fa tonga amiko tsy diso, ny rafitra Android-nao tsy misy mozika napetraka, radio na ny app setting, ka tiako ny hametraka rafitra hafa izay ananako ny zava-drehetra.
Eny miasa tsara izany arahaba izany fa niezaka tamin'ny tompoko fisaorana aho
Valio i José luis
Andramo ny 1526 araka ny volavolan'i Francisco ruiz
Lainga ny zava-drehetra, tsy mandeha izy, mpisandoka fotoana amin'ny olon-kafa ianao
Cristian Andres dia hoy izy:
Salama namana, tiako ho fantatra hoe maninona ny lenovo k50a40 no tsy manavao ahy, hoy izy ny vaovao farany k3.vibe.1.12 (kinova k3.vibe.1.13).
Izy io dia manana rom k50_eu42_cuoco92_row ary mahazo famantarana aho izay manasongadina ny saina: esory ny «hamafana cache» alohan'ny hampiharanao ity fanavaozana ity ary ny marina dia tsy azoko, azafady mba hazavao amiko, tena tiako io.
Mamaly an'i cristian andres
Salama, manana fangatahana mandritra ny 1 herinandro aho, ny lenovo k3 k50-t5, apetrako ny fanarenana twrp, miasa daholo ny dingana rehetra nefa amin'ny fotoana fanindriana ny + - ary ny lakilen'ny herinaratra dia miseho ny fanarenana lenovo, efa nomeko ny fomba ary tsy misy zavatra tiako ovaina ny android izay tsy azoko ampiasana amin'ilay avy amin'i lenovo ny angona ambadika sy ny sary masina ary ny hafa
Diego001 dia hoy izy:
4 andro aho no nanandrana fa tsy nisy n'inona n'inona
Valiny tamin'i Diego001
ulises willians dia hoy izy:
Nanao ny dingana rehetra aho fa nandefa ahy tamin'ny efijery fanarenana hafa amin'ny teny sinoa miaraka amin'ny varavarankely 4 izay tsy haiko hoe iza izy ireo
Valiny amin'ireo wilises ulises
Mametraka ary manao ny zava-drehetra amin'ny fanarahana ireo dingana voalaza. Amin'ny fotoana itodihanao ny +, -, fanalahidy herinaratra dia mivadika amin'ny fanarenana an'i Lenovo izy io. Efa imbetsaka aho no nanao izany ary tamin'ny pdanet fa tsy nisy n'inona n'inona, manomboka amin'ny fanarenana an'i Lenovo hatrany izany. Misaotra betsaka, arahaba daholo.
Izy io dia ny manavao azy amin'ny adroid 6 oh android N
Efa manana lollipop aho
Tsy misy olana amin'ny fanavaozana ny 5.1
Ankehitriny dia misy olona tiako hanampy ahy hanavao azy amin'ny android 6 oh N
Juan Zamora dia hoy izy:
Salama Jose Luis
Misaotra anao noho ity tranonkala ity
Manana olana aho: nividy fanamarihana k3 aho ary nohavaozin'ny VIBE UI tamin'i MarshMellow saingy very ny Play Store ary tsy afaka nametraka azy aho ary ireo izay tantiko dia manome lesoka rehefa mandefa.
Azo amboarina na tsara kokoa ny midina amin'ny Andriod 5.1 ary ahoana no anaovako azy.
Valiny tamin'i Juan Zamora
Eduardo Rico dia hoy izy:
Miarahaba anao aho, azafady, manana Lenovo K3 K50-t5 aho izay entina avy any Shina ary nanandrana nanao ny fizotr'ity lesona ity aho ary tsy afaka mandeha hatreto amin'ny fametrahana ny TWRP, fa rehefa manandrana miditra amin'ny fanarenana aho dia ataovy ny dingana famonoana ny telefaona finday, kitiho miaraka amin'izay, ny bokotra roa miampy ny fanalahidy ary miditra ao anaty menio aho izay ny anaran'ny menio ihany no hita amin'ny teny anglisy (Lenovo-Recovery) fa miseho daholo ny safidy rehetra amin'ny teny sinoa, io dia mitovy amin'ny lohan'ity sary manaraka ity:
fa amin'ny teny sinoa tanteraka, ary tsy afaka nanao ny dingana manaraka aho, dia ny fametrahana ny SuperSu.
Manana VIBE UI V3.1_1614_5.294.1_ST_K50-T5 napetraka ianao izao
Misaotra betsaka anao aho afaka nanongotra ny findaiko ary afaka nanohy ny dian'ny fampianarana manaraka anao https://www.androidsis.com/como-actualizar-el-lenovo-k3-note-a-android-5-1/
Miarahaba, misaotra ny sainao sy ny fotoanao.
Valiny tamin'i Eduardo Rico
Mitovy tanteraka izany. Afaka nanamboatra azy tamin'ny fomba rehetra ve ianao? Tena mampihomehy fa amin'ny teny anglisy sy sinoa ihany, ary koa, tsy avelako hametraka rindranasa Google (fianjerana rehetra)
PAVELA dia hoy izy:
Salama, manoratra aminao aho avy any Peroa, nividy finday amidy tao amin'ny fivarotana fivarotana aho. Ny olako koa dia tonga tamiko tany am-piandohana, niseho ny dokambarotra mahasosotra ny ekipa, nanomboka naninjitra ny tanako tamin'ny ekipa aho ary nahavita nanakana ny fampielezan-kevitra fa ny olana nipoitra izao dia ny tsy fampandehanan'ny jiro fampandrenesana watts rehefa mampiditra hafatra ianao dia voasakana ny fitaovana ……………. ary koa ny olana amin'ny fiteny rehefa manova azy aho dia miova ampahany ihany, ary ny ambiny dia mijanona amin'ny fiteny tany am-boalohany azafady helprrr
Valio amin'i PAVEL
Namana Nohavaoziko ny fanamarihako lenovo k3 tamin'ny 5.1 ka hatramin'ny 6.0 fa amin'ny teny anglisy sy sinoa ihany izany ankoatry ny tsy fanohanan'ny playstore dia tiako ho fantatra raha azo averina aorian'ny fanavaozana na tsy maintsy miorim-paka hamerenana azy any aminy kinovan'ny orinasa, misaotra betsaka ny kinova vibe ui izay nohavaozina ihany koa tamin'ny VIBE UI V3.1_1614_5.294.1_ST_K50-T5
Salama, nametraka faka tamin'ny fakantsariko lenovo k3 aho ary vita tsara ny fametrahana saingy rehefa manamarina raha miorim-paka amin'ny finday root ny findaiko dia milaza amiko tsia ... inona no hataoko?
gowron dia hoy izy:
Salama, nividy fanamarihana lenovo k3 aho, fa ny maodelin'ny telefaona dia K50-t3s. ary manana VIBEUI_V2.8_1535_5.128.1_ST_K50-t5 rom napetraka ianao.
Ny tutorial dia mifanaraka amin'ity maodely ity (K50-t3s).
Te-hanova ny rom ho an'ny android mahazatra aho nefa tsy ampanjifaiko. Mampirisika ny sasany ve ianao?
Mamaly an'i gowron
vgonzalz dia hoy izy:
Manao ny fakany sy mametraka ny supersu aho ary ny efijery an-trano dia tavela miaraka amin'ireo litera lenovo ary ampiasain'ny android eto ambany.
ny pc dia tsy manaiky ny findaiko hametraka na inona na inona
Ahoana no ahafahako mamaha izany?
Mamaly an'i vgonzalz
JosepMaria dia hoy izy:
Manana Lenovo K5 t3 aho nanandrana programa isan-karazany hanongotra izany ary tsy misy, azonao omena tari-dalana ve aho?
Mamaly an'i JosepMaria
Rodrigo Gonzalo Figueroa Caballero dia hoy izy:
Salama maraina, manana ny modely K3-t50 an'ny Lenovo K3 Note aho, tsy tafapetraka ny fanarenana
Misy fomba ve?
Valiny tamin'i Rodrigo Gonzalo Figueroa Caballero
vanhero dia hoy izy:
Nihomehy aho xD
Miezaka ny manongotra maodely K3 naoty P07-K50T3S aho, azoko antoka fa raha tsy nahita ilay maodely K50-t3 ... dia ho sarotra kokoa ny mahita ahy.
Mamaly an'i vanhero
mariano navarro dia hoy izy:
Salama fangatahana, nanana telefaona izay efa nanova ny rom teo aloha. Ampidino izao satria nanana olana tamin'ny fakan-tsarimihetsika aho, esory amin'ny telefaona ny zava-drehetra ary apetraho eo am-boalohany izany ary tonga lafatra nefa manana olana kely aho, tsy afaka mampiasa ny fifandraisana data finday, nahoana? Efa namboariko ny apn an'ny Arzantina mazava ary raha teôria dia salama tsara izy ireo (nitady azy ireo tao amin'ny google aho ary nanandrana ireo izay misy terminal mazava) hankasitrahako ny valinteninao
Mamaly an'i mariano navarro
Roberto Cacho Martinez dia hoy izy:
Salama, nividy ny K3NOTE efa tamin'ny android 5.1 napetraka aho. (5.1 VIBEUI_V2.8_1535_5.128.1_ST_K50-T5) …… saingy tiako apetraka amin'ny horonan-tsary ity mba hialana amin'ireo rindranasa efa napetraka mialoha. Azonao atao ve ny manao ilay dingana natolotry Atoa Ruiz anay ??? MISAOTRA
Valiny tamin'i Roberto Cacho Martinez
Fanontaniana iray, manana an'ity 5.0 ity aho raha ny amiko, tsy misy rindranasa sinoa na zavatra hafa toa izany, be ny feon'ny mpandahateny, ny tadiaviko dia ny fananana ny RADIO izay hita ao anaty ny pitsopitsony teknika, fa avy eo tsy mivoaka ilay sary masina. Ny fanontaniana dia hoe tonga aminao ve ny onjam-peo na rehefa manavao ny 5.1 na rehefa miditra amin'ny faka dia hita izany. Misaotra
Roberto Martinez dia hoy izy:
Tsy misy onjam-peo amin'ny ozinina. Ary tsy mitondra headphone koa izy
Valiny tamin'i Roberto Martínez
Tsy manana radio ianao ??? ary rehefa miorim-paka dia hiseho izany?
Ny sary famantarana ny onjam-peo dia tsy niaraka tamin'ny fitaovam-pandrenesana, fa amin'ny fampiharana kosa dia miseho ny onjam-peo ary manana kbs vitsivitsy izy nefa tsy avela hampiasaina ...
Fa maninona amin'ny maody fanarenana rehefa manandrana mametraka aho dia toa tsy nahomby ny fametrahana azy… inona no tokony hataoko eo?
Misaotra betsaka Andriamatoa Francisco Ruiz !!! Nandeha tanteraka ny zava-drehetra! Nanaraka ny fanazavany tsikelikely aho ary tsy nanana olana na inona na inona. Ankehitriny, ary araka izay haingana indrindra, te-hanavao ny rom amin'ny zavatra azo antoka sy voasedra amin'ny teny Espaniôla aho. Hanaraka ny hafatrao aho ary hijery raha misy an'izany. Fiarahabana avy any Orogoay !!!
Juan Jose Gonzalez Castellanos sary placeholder dia hoy izy:
Tsy haiko raha mbola misokatra ity lahatsoratra ity, saingy tiako ho fantatra raha nanana olana tamin'ny wassap ianao rehefa nametraka azy taorian'ny fametrahana android 5.1.
Nataoko tsara ny zava-drehetra ary nety tamiko izany fa tsy afaka ny hametraka wassap aho ka tsy misy ilàna azy ny findaiko. Tsy hitako izay hatao, manandrana mametraka rom hafa aho satria efa novakiako fa tsy misy vahaolana ary tsara ny nanova rom. Misy olona afaka manampy ahy ve, misy tutorial miaraka amin'ilay vahaolana.
Valiny tamin'i Juan Jose Gonzalez Castellanos
Mozilla dia manakana ny kinova Flash rehetra ao amin'ny Firefox